तपाईंको जीवनको ९ यी लाभदायक खाने बानीहरू बनाउनुहोस् (9Tips for good health in Nepali) – मधेस
राहुल कक्षा दसमा अध्ययन गर्दै हो र अध्ययनको लागि धेरै कडा परिश्रम गर्छ । ऊ हप्तामा ८०-९० घण्टाको अनुसूची छ । अध्ययनको कारणले गर्दा खानपिन, खेलकुद अथार्थ आफ्नो स्वास्थ्यको लागि समय निकाल्न सक्दैनन्। यस्तै समय बित्दै गयो पछि ऊसको लामो समय सम्म अध्ययन को तनाव संग, राहुल अब पीडा दुखाइ, थकान र कब्ज देखि पीडित छ।
यस्तो उमेर मा जब व्यक्ति आफ्नो भविष्यमा सफलता प्राप्त गर्न चाहन्छ। आफ्नो स्वास्थ्य बिगार्छ र यदि व्यक्ति उपयुक्त आहार देखि सम्बंधित बानी अपनाये त त्यो आफ्नो सेहत को धेरै हद सम्म निको गर्न सकिन्छ। यसरी केहि बानी तपाईं सुरु गर्न सक्नुहुन्छ :
1.खानेकुरामा ध्यान दिनुहोस:
हामी प्रायः टिभी वा सन्देश मोबाइलमा हेर्दा खाना खान्छौँ। खानामा ध्यानको कमीको कारणले गर्दा हामीहरु प्रायः हाम्रो भूखभन्दा बढी वा कम खाना खान्छौं। यदि हामीहरु खानामा ध्यान दिएर खान्छौ भने शरीरलाई चाहिने जति खान्छौ। त्यसैले अर्को पटक तपाईं खाना खानु भन्दा पहिले रिमोट नियन्त्रण (TV) र मोबाइलबाट आफैंबाट टाढा राख्नुहोस्।
2. हरियो तरकारी खानुस्:
हरियो तरकारीमा प्रोटीन, फलाम, क्याल्सियम धेरै नै हुन्छ। त्यसैले आफ्नो तपाईंको खानामा हरियो तरकारी निश्चित समावेश गर्नु।
3. घरको खाना खानुस्:
अतिरिक्त बाहिरको खाना तपाईंको स्वास्थ्यको लागि राम्रो हुदैन। घरमा तपाइको स्वाद अनुसार खाना हुन्छ र खर्च पनि कम हुन्छ।
4. नाश्ता कहिले छोड्नुस:
तपाइँको नाश्ता कहिल्यै नछोड्नुहोस् बिहानको नाश्ताले सम्पूर्ण दिनको लागि तपाईंलाई तयार पार्छ। त्यसैले निश्चित रूपमा एक पोषक र पूर्ण नाश्ता हुन्छ।
5. पानी समय र उपयुक्त मात्रा मा पिउनुस:
हाम्रो शरीरमा 70% पानी बनेको हो। त्यसैले यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईं उचित मात्रामा पानी पिउनुस। पानी शरीरबाट गन्ध हटाउन मद्दत गर्दछ। तर पानीको बीचमा खाना खाईनु हुँदैन, किनकि यसो गर्दा पाचन प्रकार्य कमजोर हुन्छ। 30 मिनेट अघि र 30 मिनेट पछि पानी पिउनुस्।
6.उपयुक्त मात्रा प्रोटीन खानुस्:
7. खानलाई राम्रोसंग चपाउनु:
धेरै मानिसहरू छिटो खानु कारणले खानलाई राम्रोसंग नाचापईकन खान्छ। राम्रोसंग नचपाइएको खाना पाचंप्रनालीमा पाचन समय लाग्छ र पाचंप्रनालीलाई थकाउछ। त्यसैले भोजनलाई पूर्ण रूपमा चपाउनु। यसरी खाना चाँडो र राम्रो पाचछ।
8.फास्ट फूड र नरम पेयबाट टाढा रहनुहोस्:
यद्यपि फास्ट फूडले उनीहरूको स्वाद कट्ट्सलाई खुसी पार्न सक्दछ तर सामान्यतया यसको शरीरमा धेरै हानि हुन्छ। यो अस्वस्थ र ट्रांस बोसोले हुन सक्छ जुनशरीरको घातक हुन्छ। साथै, कार्बोनेटेड पेय पदार्थ (ठुलो पेय, शीतल पेय) मा धेरै उच्च मात्रामा चिनियाँ हुन्छन्, जसले मोटापा, मधुमेह र दाँतका रोगहरूको कारण हुन सक्छ। यी हानिकारक पेय भन्दा लेमनमेट आफैलाई पुनः ताजा गर्न सक्षम छ। पेट भर्नु भन्दा बढी स्वादको लागि खानु हुन्छ तर तपाई को खानको लिस्टमा फलफुल छैनभने केहि पनि छैन्न। स्वस्थ रहनको लागि कम्तिमा एक फलफुल जरुरी हुन्छ।
9. खान खाए पछि:
न केवल राम्रो आहारले स्वास्थ्य हुन्छौ यो पनि ध्यान दिन महत्त्वपूर्ण छ कि हामीले के गर्नु पर्छ हामीले खाने पछि र के गर्नु हुँदैन। हामीलाई पाचन पूर्ण रूपमा फईदा पाईन्छ जब पूर्ण रूपमा डाइजेशन पाईन्छ र भोजनको सबै पोषण हाम्रो शरीरमा अब्जॉर्ब हुन्छ । अधिकतर मानिसहरू थाहा भईकन नभइकन कति यस्तो कम गर्छ कि डाइजेशन विनाश र स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर छ।
असल खाने बानीले तपाईंको व्यक्तित्व बढाउन सक्छ। त्यसैले आफ्नो खाना बुद्धिमानी देखि छान्नुहोस् र यो उत्तम तरिकाले खानुस्। साल्टिक भोजनले तपाईंको जीवनमा अचम्मको अस्वस्थ परिवर्तन ल्याउन सक्छ, त्यसैले बुद्धिमानी खाना छनौट गर्नुहोस्।
Previous धुम्रपान स्वास्थ्यमा हानिकारक छ